श्रीओम रोदन – मझेरी डट कम
महिला-पुरुष समानताका प्रचारप्रसार जतिसुकै भए पनि व्यावहारिकरूपमा हुन सकेको छैन । कानुनले समान हक र अधिकार प्रत्याभूत गरेको भए पनि सामाजिक प्रचलन, सांस्कृतिक मान्यता, धार्मिक परम्परा तथा पुरातन मानसिकताका कारण महिलाहरू अहिले पनि विभेदका सिकार बन्न बाध्य छन् ।
वि.सं. १९८५ कात्तिक २९ गते पहिलो पटक यस धर्तीमा आँखा खोलेका इन्दुशेखर चालिसे रामबाबु, रामेश्वर हुँदै नेपाली साहित्यको आख्यान विधामा कलम चलाएर ‘रमेश विकल’ को नामले चर्चित बन्न सफल भए । वि.सं. २००६ सालमा ‘शारदा’ पत्रिकामा ‘गरिब’ शीर्षकको कथा प्रकाशित भएदेखिको उनको लेखनयात्रा जीवभर चलिरहृयो ।
जहाँ प्रेम हुन्छ, त्यहाँ नियम हुँदैन । जहाँ नियम हुन्छ, त्यहाँ प्रेम हुँदैन । अर्थात् प्रेमको कुनै सीमा स्तम्भ, कुनै संविधान हुँदैन । जे पनि जायज र सम्मत नै ठहरन्िछ । युद्धलाई पनि त्यस्तै भनिन्छ । सबै सम्भव हुन्छ भनिन्छ युद्धमा । अर्थात्, युद्धको कुनै गणित र सूत्र हुँदैन, ठ्याक्कै लागू हुने ।
गीत पढ्नेभन्दा सुन्ने सिर्जना भए पनि अहिले दृश्य माध्यमहरूका कारण गीत सुन्नेभन्दा हेर्ने सिर्जनाझैँ बन्न थालेको छ । जे भए पनि गीत आफैँमा पूर्ण विधाभने होइन । गीतमा सङ्गीत र स्वरको सङ्गम भएपछि मात्रै गीतले जीवन्तता र पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दछ । यद्यपि गीतहरूको सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने होड भने बढ्दो छ । यही क्रममा चूडामणि देवकोटाको गीतसङ्ग्रह ‘मनका हरफ’ प्रकाशित भएको छ ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपछि भाषासाहित्यको क्षेत्रमा दिइने पुरस्कार र सम्मानको सङ्ख्या अकल्पनीय रूपमा बढेका छन् । व्यक्तिगत रूपमा पुरस्कार दिने परम्परा निकै अघिदेखि चल्दै आएको भए पनि संस्थागत रूपमा भने वि.सं. २०१० बाट सुरु भएको पाइन्छ । नेपाल भाषाका साहित्यकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पाटनका उद्योगपति एवं समाजसेवी स्वयम्भूलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको ‘श्रेष्ठ सिरपा’ पुरस्कार नै नेपालको पहिलो पुरस्कार हो ।
साहित्य र राजनीति दुबै क्षेत्रमा स्थापित भएका धेरै साहित्यकार राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छन् । जसमध्ये प्रदीप नेपाल दुबै क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्न सफल स्रष्टा हुन् । ठूलो पार्टीको नीति निर्माण तहको हैसियत राख्ने नेपाल पटकपटक मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । उनी साहित्यमा कथा, उपन्यास, नियात्रा, संस्मरण आदि विधाका तीन दर्जन कृतिका स्रष्टा हुन् । ‘बन्दीगृहका सिर्जना’ उनको पछिल्लो संस्मरण र सिर्जनाहरूको संयुक्तसङ्ग्रह हो ।
भीडमा एक्लो हुँदा कस्तो हुन्छ? अनुभव नगर्ने धेरै कम होलान्। एक्लो भएर एक्लो हुँदाको अनुभव पनि नहुने कुरो भएन।
यी दुईमध्ये कुनले बढी सताउँछ होला? भीडमा एक्लो हुनुलाई अरूसँग मिल्न नसक्नु भनेर बुझ्नुपर्ला कि? कि चाहेर एक्लिनुको मजा अर्कै हुन्छ भनेर? अचेल विश्वभरि यसको बहारजस्तै आएको छ। ध्यान गरेर संसारबाट मात्र होइन, आफैँबाट पनि एक्लिने। तर, एक्लो भएर एक्लिनुचाहिँ पीडादायी नै हुन्छ। मौन कारागारजस्तो।
“गोर्खा आश्राङका रेसम रोकाय जमेलियाको मरुभूमिमा गधा जोतिरहेका छन् भने नवलपरासीका शोभाकान्त लामिछाने भेडा चराइरहेका छन् । धादिङका किशोरकुमार सुवेदी कार वास गरिरहेका छन् भने तेह्रथुमका तुलसी भट्टराई गाउँमा आफ्नो पिताको निधनको खबर पाएर पनि बिदा नपाएकोले काममै लागिरहेका छन् । स्याङ्जाका तिलबहादुर सुनार ५० दिराममा मान्छेको तौल जोख्ने मेसिन झोलामा बोकेर हिँडिरहेका छन् भने गोरखाका जुनबहादुर रानामगर दिनराम भुलेर करेसाबारीमा लसुन रोपिरहेका छन् ।”
श्वेत सलाम !
श्वेत सलाम ! यो कुनै अभिवादनको अर्थमा होइन । गर्नैपरे आफ्नै परम्परा छन् । फरक भएर गर्नेहरू लालसलाम नै भन्छन् तर यो जसले पायो त्यसले गर्दैन र जसरी पायो त्यसरी पनि गरिँदैन । अलिकति भए पनि राजनीतिको चन्दन दलेपछि मात्र लालसलाम गर्ने प्रचलन छ । यसको शैली पनि आफ्नै प्रकारको छ । दाहिने हातको मुठी कसेर कानको छेउछाउसम्म दह्रोसँग उठाएपछि मात्र भन्न मिल्छ लालसलाम ।
पाँचौँ गन्तव्यको रूपमा हामी मनाङ पुग्यौँ । यहाँ कार्यक्रम गर्ने कुनै योजना थिएन तर मन्त्री भोलि काठमाडौँ र्फकन लागेकोले विमानस्थलमा नै कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाइसक्नुभएको रहेछ रमेशजीले । हामी बसेको होटलबाट विमानस्थल नजिकै थियो । मनाङ जिल्लाको विमानस्थल भएकोले नेताहरू, कर्मचारीहरू, विदेशीहरूलाई ओहोरदोहोर गराउने अखडा बनको रहेछ हुम्दे ।
हो, मैले सगरमाथा चढिन तर मेरो हृदयले सगरमाथालाई छोयो । हो, यस्तै लाग्यो मलाई । जब म हिमाली दृश्यहरूको अवलोकन उडानबाट अवतरित भए । त्रिभुवन विमानस्थलमा रोकिएको बुद्ध एयरको विमानबाट ओर्लन लाग्दा सुन्दरी एयर होस्टेजले अभिवादन गर्दै प्रमाणपत्र दिएको थियो । सगरमाथा नजिकै बुद्ध एयरको विमानको फोटोसहितको प्रमाणपत्र ।
“श्रेष्ठजी ! तपाईंको घर नजिक अस्पताल भएको कुरा सुनेको छु, डाक्टरहरूसँग तपाईंको हेलमेल राम्रै होला । मलाई कतैबाट चार ग्रेन मफिर्न अथवा पोटासियम साइनेड ल्याइदिए म तपाईंलाई जीवनको सच्चा साथी सम्झने थिएँ र तपाईंको सहयोग म सदा सम्झिरहने नै छु पनि ।”